Mogadishu Journal » 2019 » April » 15
Dil Goordhow ka dhacay Magalada Muqdisho
Mjournal :-Kooxo hubeysan ayaa Goordhow Xaafad ka tirsan degmada Karaan ee gobolkan Banaadir waxa ay ku dileen Nin la sheegay in uu ahaa Shacab kana mid ahaa dadka ku nool degmadaas. Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in dilka uu si gaar ah uga dhacay Halka loo yaqaano Shineema...
Mjournal :-Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo uu wehelinaayey Wasiirka Wasaaradda Duulista Hawada iyo Garoomada Xuseen Cismaan Lugatoor (Gabiley) ayaa magaalada Dubai kulan kula qaatay madaxda shirkadda duulimaadyada ee Fly Dubai Kulankan oo muhiimad gaara...
Mjournal :-Ilhan Cumar oo ah mudane ka tirsan Aqalka Wakiillada ee Mareykanka, ayaa sheegtay in ay kordheen hanjabaadaha dilka ah ee loo soo dirayo. Ilhan waxay sheegtay in dhanbaallada xambaarsan hanjabaadda dilka ah ee iyada ka dhanka ah ay soo bateen, wixii ka danbeeyay marki...
Mjournal :-Koox burcad Koofur Afrikaan ah ayaa xalay Magaalada Johannesburg waxay ku dileen muwaadin Soomalaiyeed oo ku ganacsanayay dalka Koofur Afrika. Marxuumka la dilay oo lagu magacaabi jiray Nuur Dheere ayaa waxaa toogtay Koox Burcad Koofur Afrikaan ah, isagoo ka sii...
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay, kadib markii magaalada Washington ee dalka Mareynkanka uga soo qeyb galeen shir kala duwan. Wafdiga Ra’iisul Wasaaraha waxaa Garoonka diyaaradaha Aadan...
The Cuban government is working to rescue two doctors abducted in Kenya by suspected Al-Shabaab militants, said President Miguel Diaz-Canel on Sunday. “Cuba is working tirelessly for the safe return of Assel and Landy, our doctors kidnapped in Kenya,” Diaz-Canel...
Mjournal :-Wasiirka Amniga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow (Ducaale) ayaa sheegay in dhowaan la soo magacaabi doono Taliyaha Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka oo muddo 7 bilood banaanaa. Wasiir Ducaale oo shalay su’aalo lagu weydiiyay kulankii Baarlamaanka ee...
Mjournal :-Hawlgal ay si wada jir ah u filyeen Ciidamada Qaranka iyo saaxiibadooda Maraykanka ayaa lagu dilay Sarkaal Sare oo ka tirsanaa Kooxda Daacish-ta Soomaaliya,sida lagu sheegay War kasoo baxay dowladda Federaalka Soomaaliya. Howlgalkaan oo ahaa duqayn ayaa ka dhacay...
Mjournal :-Xalay fiidkii ayaa rag hubeysan waxaa ay deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka Magalada Muqdisho ku dileen ilaa Saddex ruux, iyada oo la xaqiijiyey in dilka kadib ay goobta ka baxsadeen. Dilka ayaa yimid kadib markii Ragga hubeysan ay rasaas ku fureen Gaari nooca...
Mjournal :-Dowlad Goboleedka Puntland ayaa ku dhawaaqay inay mamnuuceen soo dejinta, dhoofinta iyo ka Ganacsiga hubka noocyadiisa kala duwan iyo waliba Agabka kale ee Ciidamada ay isticmaalaan. Wareegto kasoo baxday Xafiiska Wasiirka Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Puntland...